Rehefa tonga tany Kanana ireo rahalahin’i Josefa, dia nambarany tamin’ny rainy izay rehetra nitranga. Nalahelo aoka izany i Jakoba. Hoy ny fihiakany: ‘I Josefa tsy eto intsony, ary i Simeona koa izao tsy eto intsony. Tsy havelako hitondra an’i Benjamina zanako faralahy ianareo.’ Nefa rehefa nanomboka lany ny sakafon’izy ireo, dia tsy maintsy namela azy ireo hitondra an’i Benjamina ho any Ejipta i Jakoba, mba hahafahana hahazo sakafo fanampiny.
Nandray fitenenana i Joda ka hoy izy: ‘Raha miverina tsy miaraka amin’ny zazalahy aho, dia ho faty ny raiko satria tiany loatra izy io. Noho izany, aoka re izaho no hohazonina eto ho toy ny andevonao, fa avelao ny zazalahy hody.’
Hizara Hizara Tsapain’i Josefa Ireo Rahalahiny
my tant. 24